The Bible na-ekwu na Jizọs nwere obere ntutu? | Apg29
The Bible na-ekwu na Jizọs nwere obere ntutu?
Ọtụtụ mgbe kọwara Jizọs na ogologo ntutu isi, ma ọ bụ ya n'ezie banyere Bible?
Clipboard otú a ole na ole artists na-eche banyere ihe Jizọs anya dị ka.
M na-agụ ọtụtụ online ma Jizọs nwere ogologo ma ọ bụ obere ntutu. O yiri ka nke a nke e n'ọrụ dị nnọọ ọtụtụ, n'ihi na e nwere ọtụtụ dere banyere nke a.
"Enyere m azụ m ndị na-akụ m na m cheeks ndị wetara m na ajị agba. Ezoro m ihu m agaghị si ihere na ọ gbụpụsịrị ọnụ mmiri. "- Isaiah 50: 6.
Na fim nakwa na ihe oyiyi e sere Jizọs na ogologo ntutu isi na afu-ọnu. Na o nwere a na ajị agba ya na Bible n'ihi na ọ na-ekwu na ha "na-wetara afụ ọnụ m." The okwu nke Bible bụ na uzọ ọzọ a amụma nke ahụhụ Jizọs tara na n'obe. Ma ọ e chere na ọ ga-enwe ogologo ntutu isi?
Ugbu a, ọ bụ ebe ọ bụla n'ime Bible banyere Jizọs ntutu ogologo ma e nwere Akwụkwọ Nsọ na-egosi na Jizọs nwere obere ntutu. Pọl na-ede na ọ bụ ihe ihere ka nwoke nwere ogologo agiri-isi.
Ma ọ bụ adịghị amụta nnọọ ọdịdị gị na ọ bụ ihe ihere ka a nwoke ma ọ bụrụ na o nwere ogologo agiri-isi? - 1 Cor. 11:14.
Ma e nwere ndị nọ na-Nazarites na ogologo ntutu. Nazarites bụ, n'ihi na ihe atụ, simpson na Jọn Baptist.
"Ma mmụọ ozi Jehova pụtara ìhè n'ihu nwaanyị wee sị ya:" Lee, ị na-àgà na-adịghị nyere nwa ụmụ ọ bụla, ma na ị ga-atụrụ ime na ibu nwa-nwoke [simpson]. Ugbu a jide n'aka na ị na-aṅụ mmanya ma ọ bụ ike ihe ọṅụṅụ na adịghị eri ihe ọ bụla na-adịghị ọcha. le, ị ga-atụrụ ime na ibu nwa-nwoke, na n'elu isi-ya ọ dịghịkwa agụba ga-abịa, n'ihi na nwata ga-a Nazarite Chineke site n'afọ. Ọ ga-amalite nnapụta nke Israel n'aka ndi Filistia. " - Ndị Ikpe 13: 3-5
N'ihi na ọ na [Jọn Baptist] ga-abụ onye ukwu n'ihu Jehova. Mmanya na ike ọṅụṅụ ọ ga-aṅụ, na site n'afọ, ọ ga-ejupụta na Mmụọ Nsọ. - Luke. 1:15.
E wezụga ya ogologo ntutu isi nwere simpson-asaa braids.
Dom 16:13: "Delilah si Samson," Ruo ugbu a ị ghọgburu m na ụgha m. Ugbu a-agwa m otú gị agbụ. "Ọ sịrị ya:" Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị na-ikpa asaa akpọchi isi m jiri owu gị ákwà. ""
A Nazarite nwere tinyere mmanya mmanya. Ma Jizọs abụghị a Nazarite n'ihi na ọ ṅụrụ mmanya ma si otú anyị na-aghọta na ọ bụghị ndị nwere ogologo ntutu isi.
"Nwa nke mmadụ [Jizọs] wee bịa, na ọ na-eri na ọṅụṅụ, na ị na-ekwu: Le, a-eribiga nri ókè na onye aṅụrụma, a enyi nke ọna-utu na ndi-nmehie!" - Luke 7:34
Na m search na net nwere m hụrụ a page na-ekwu na Jizọs bụ ịkpụ ka Orthodox Jewish ikom taa.
"Unu bee ntutu ke n'akụkụ nke isi gị ma ọ bụ clip n'ọnụ gị na ajị agba." (3 mos 19.27)
3 Genesis, Chineke nyere ha iwu ndị nchụàjà, na ndị ikom na ndị obodo na otú ha ga na-elekọta ya na ajị agba na ntutu isi. Ya mere kweere na Jizọs na ndị sokwaara a. Ma, ebe a na m na-eche ị na-agụ nke ukwuu.
Dị ka anyị bụ ụmụ mmadụ
Ọ dịghị, ọ na-ele anya dị ka onye Juu ọ bụla n'oge ahụ. O nweghị protruding anya. Ọ bụ n'ezie na Bible na ọ "dị ka mmadụ" (Ndị Filipaị 2: 7).
... nke, mgbe ọ nọ na n'ụdị Chineke, ọ bụghị na-ewere ya dị ka a kwakọọrọ akụ hà na Chineke, ma nyere onwe ya elu, were na ụdị ohu, na dị ka anyị bụ ụmụ mmadụ. - Ndị Filipaị 2: 6-7.
O nwere a nkịtị anya, nke anyị na-aghọta dị ka ndị sabo Judas raara ya na a nsusu ọnụ dị ka a na-egosi na ndị agha ga-ma onye Jizọs bụ na ha ga-amalite.
Ute 26:48: raara nye nyere ha ihe ịrịba ama, na-asị, "Onye ọ bụla m susuru ọnụ, ọ bụ n'ebe ahụ, oké ọgba ya."
Ọ bụ ezie na Jizọs dị mmadụ nkịtị, ike ya divinity enwu site na nke ọ na otu oge.
"O we nwogha n'iru ha: iru-ya na-achakwa ka anyanwụ, + uwe ya wee na-acha ọcha dị ka ìhè." - Matthew 17: 2
E nwere otu ebe ke Bible n'ezie na-akọwa Jesus, ma ọ bụghị ya n'ogologo. Nke a bụ mgbe ahụ bilitere Jizọs kpugheere Onyeozi John nọ na Patmọs.
Na isi-ya na ntutu isi ha na-acha ọcha dị ka ajị, dị ka na-acha ọcha dị ka snow, ya na anya ya dị ka a ire ọkụ. - Up 1:14.
Olee otú ị na-aghọta Jesus
Ma ọ bụghị n'ihi na nke Jesus ntutu ogologo na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-aghọta Jesus ma ọ bụ. Ọ bụ ya sårmärkta aka.
Tomas ekwughị "m ga-ahụ Jizọs, ogologo ntutu isi, m na-eche," ma "Ọ bụrụ na m na-adịghị esi na-ahụ na Mbipụta nke mbọ ya aka na-arapara n'ahụ m mkpịsị aka n'ime Mbipụta nke mbọ na-arapara n'ahụ m aka n'akụkụ ya, m na-eche na ọ bụghị "(John 20:25).
Onye ọ bụla ọ na-asị na ha na-enwe Jesus, ogologo ntutu ma ọ bụ obere-haired, i nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie Jesus site ahụ ma ọ bụrụ na o nwere ntu n'oghere ya aka.